Cosmogony: यो के हो, विशेषताहरु, मिथक र कथाहरू | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जर्मन पोर्टिलो | 22/04/2021 12:35 | Ciencia
आज हामी टर्मको बारेमा कुरा गर्नेछौं ब्रह्माण्ड। यसले संसारमा जीवनको उत्पत्ति वर्णन गर्ने विभिन्न मिथ्यालाई जनाउँछ। शब्दकोषको अनुसार ब्रह्माण्डको जन्म र विकासमा केन्द्रित विज्ञानको सिद्धान्तलाई शब्दकोषको अनुसार ब्रह्माण्ड शब्दले व्याख्या गर्न सक्दछ। जे होस्, सबैभन्दा सामान्य प्रयोग जुन यसको बारेमा मिथकीय कथाहरूको श्रृंखला स्थापना गर्न हो।
यो लेखमा हामी तपाईलाई ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र ब्रह्माण्डको उत्पत्तिबारे के भनिएको छ जान्नु आवश्यक सबै कुरा बताउनेछौं।
1 ब्रह्माण्ड के हो?
3 ग्रीक र चिनियाँ संस्कृतिमा कोसमोगोनी
ब्रह्माण्ड के हो?
हामीलाई थाहा छ कि ब्रह्माण्डको उत्पत्ति एकदम जटिल छ र निश्चित रूपमा १०००% जान्न सक्दैन। त्यहाँ धेरै सिद्धान्तहरू छन्, ठूलो धमाका सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको छ। ब्रह्माण्डको विकास र जन्मको मेडिकल लेखाको लागि ब्रह्माण्डको सबैभन्दा सामान्य प्रयोग हो। यसमा मिथ्या र दन्त्यकथाहरूले कथा बनाउँदछन् जसमा देवताहरू बिभिन्न युद्धहरूमा मिल्छन् र ब्रह्माण्डलाई जन्म दिन स strugg्घर्ष गर्दछन्। यस प्रकारको कथन सुमेरियन र इजिप्टियन पौराणिक कथामा रहेको छलाई यसको मतलब यो हो कि यो इतिहासमा एकदम महत्त्वपूर्ण भएको छ र धेरै संस्कृतिहरू मार्फत पार गरेको छ।
त्यहाँ ब्रह्माण्डका धेरै प्रकारका छन् र ती इतिहासभरि धेरै प्रकारका संस्कृतिहरू द्वारा विकसित भएका छन्। सामान्यतया, ती प्रत्येकको ब्रह्माण्डको साझा उत्पत्ति छ र यो अराजकता हो। अराजकता भित्र त्यहाँ तत्वहरु सँगै समूहीकृत छन् र अलौकिक शक्ति वा दिव्यताहरूको हस्तक्षेप को लागी धन्यवाद क्रम। दिमागमा राख्नुहोस् कि ब्रह्माण्डको धेरैजसो विज्ञानमा केन्द्रित छैन। तसर्थ, तिनीहरू खगोल विज्ञान संग भ्रमित गर्नु हुँदैन।
यो कथा र पौराणिक कथाहरूको शृंखला हो जुन ब्रह्माण्डको सिनफिल्लिया कार्य सिद्धान्तलाई जनाउँछ जुन लडाईहरू र मिथ्याहरू मार्फत देवताहरूले एक अर्कालाई सामना गरेका थिए जसको परिणामस्वरूप ब्रह्माण्ड र विश्वको सृष्टि भयो।
सबै भन्दा पहिले यो ब्रह्माण्डको अध्ययन गर्छ भनेर जान्नु हो। यो भन्न सकिन्छ कि ब्रह्माण्ड को युग निर्धारित गर्न आकाशगंगा र स्टार क्लस्टरको उत्पत्ति र विकास अध्ययन गर्नु हो। जे होस्, यसको लागि यो सेटमा निर्भर गर्दछ पौराणिक, दार्शनिक, धार्मिक र वैज्ञानिक सिद्धान्तहरू ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको बारेमा। उनले आफ्नो सिद्धान्तहरु को एक हिस्सा विज्ञान मा आधारित गर्न कोशिस गर्दछ, तर जब यो पौराणिक कथा मा निर्भर गर्न को लागी आउँछ, उहाँ एक बिट विश्वास छ।
विश्वको शुरुको सैद्धांतिक बुझाइमा ब्रह्माण्डको शब्दले यसको जोड दिएको छ जुन वर्तमान ज्ञान र स्वीकार्य सिद्धान्तहरूको अनुसार ठूलो धमाकाको सिद्धान्तसँग निकट सम्बन्धित छ। र यो यो हो कि ब्रह्माण्डले पनि ब्रह्माण्डको वर्तमान संरचनाको अध्ययन गर्दछ।
आउनुहोस् हामी ब्रह्माण्डको मुख्य विशेषताहरू के हुन्:
यसले मिथ्याहरूको एक ठूलो संख्या हो जुन एक अर्काको विरोधाभास हुन्छ। यी मिथकहरूलाई सभ्यताको क्रममा परिमार्जन गरिएको छ र आज तिनीहरू पहिले जस्तो छैन।
उनीहरूसँग धेरै अन्धविश्वास र आत्मसम्मान छ ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको साथ पौराणिक र दिव्य पात्रहरू।
यो मिस्र भित्र एक धेरै राम्रो स्वीकृति थियो र तिनीहरू व्यापक देवीदेवता थियो कि रचनात्मक शक्ति को ठूलो मात्रा बुझ्न र व्यक्त गर्न प्रयोग गरियो।
कॉसमोगोनी मार्फत हामी हतियारको क्षणमा फिर्ता जान सक्दैनौं वा मौलिक अराजकता जुन संसार अहिलेसम्म गठन गरिएको थिएन।
ब्रह्माण्ड, अन्तरिक्ष र देवताहरूको उत्पत्ति को धारणा मार्फत वास्तविकता स्थापना गर्न एउटा मार्ग पत्ता लगाउन कोशिस गर्नुहोस्। ध्यानमा राख्नुहोस् कि यसले मानवता र यसलाई बनाउने प्राकृतिक तत्त्वहरूको साथ मिश्रित विदाइहरू उल्लेख गरेर सबै कुरा व्याख्या गर्ने प्रयास गर्दछ।
सबै धर्महरूको एक ब्रह्माण्डको हुन्छ जुन सृष्टि वा ईमान्ने प्रक्रियाको साथ पहिचान गर्न सकिन्छ।
यो शब्द संसारको जन्म को अध्ययन मा केन्द्रित छ।
पहिलो मानव सभ्यताहरु का अस्तित्व थियो कि एक कास्मोगोनी थियो कि मिथ्या माध्यमबाट स्थलीय र अन्तरिक्ष घटनाको व्याख्या गर्न खोजे। "विज्ञान" को यस शाखाबाट विभिन्न प्राकृतिक घटनाहरूको उत्पत्ति र कारणहरू बारे मिथ्याहरूको एक ठूलो संख्या आउँछ।
ग्रीक र चिनियाँ संस्कृतिमा कोसमोगोनी
हामीलाई थाहा छ कि प्रत्येक धर्मको एक प्रकारको ब्रह्माण्ड हुन्छ। युनानी संस्कृतिको सन्दर्भमा यो कथाको समूहले बनेको थियो जसमा ब्रह्माण्ड र मानवको उत्पत्ति सम्बन्धी हेलेनिक सभ्यताको ठूलो संख्यामा विश्वास र मिथ्या थियो। Theogony को उपस्थिति इलियड र ओडिसीका कविताहरूको साथमा यो पौराणिक कथाको लागि प्रेरणाको मुख्य स्रोत हेसिड थियो। ग्रीकहरूका लागि संसारको सुरूवात अन्तरिक्ष भित्र एउटा अराजक थियो जुन पृथ्वी, भूमिगत र शुरुवात भएको थियो। पृथ्वी दाँतको लागि एउटा कोठा थियो, अंडरवर्ल्ड पृथ्वीको मुनि थियो र सिद्धान्तले पदार्थको बिभिन्न तत्वहरूका बीचको अन्तरक्रियालाई बढावा दिन्छ।
सबै अराजकता बाहिर रात र अन्धकार उत्पन्न हुन्छ। जब उहाँ सँगै हिँड्नुभयो, प्रकाश र दिन सिर्जना गरिएको थियो। मिथ्याको माध्यमबाट उनीहरूले संसारको सृष्टि भन्न कोशिस गर्छन्।
अर्कोतर्फ, हामीसँग चिनियाँ संस्कृतिको कॉसमोगोनी छ। चीनमा भएको अवधारणाले काई तीनको सिद्धान्तलाई विस्तारपूर्वक व्याख्या गर्‍यो जुन यो पुस्तक थियो जुन ईसापूर्व चौथो शताब्दीतिर लेखिएको थियो। यस सिद्धान्तले पृथ्वी पूर्ण रूपमा समतल भएको र दुबै 80.000०,००० को दूरीमा छुट्टिएको थियो (एउटा ली हो) आधा किलोमिटर बराबर)। यसबाहेक, यो सिद्धान्तले त्यो सुनिश्चित गर्‍यो सूर्यको व्यास १,२1.250० थियो र आकाशमा गोलाकार गतिमा अघि बढिरहेको थियो।
हामीसँग एउटा क्रिश्चियन ब्रह्माण्डो पनि छ जसमा हामीसँग उत्पत्तिमा संसारको उत्पत्ति भएको छ, जुन बाइबलको पहिलो पुस्तक हो। यहाँ कसरी छ भगवान येहभले शुरूमा संसार सृजना गर्न शुरू गर्नुभयो। सृष्टि एउटा प्रक्रिया हो जुन पृथ्वीलाई आकाशबाट पृथक गरेर, पानीलाई पृथ्वीबाट र अन्धकारबाट उज्यालोमा गरिन्छ। यसको अर्थ संसार पूर्ण रूपमा अराजकताबाट सुरु गरेर कम्पोनेन्टहरूको बिभाजनद्वारा सिर्जना गरिएको हो।
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाईं विश्वकोष र यसको अध्ययनको बारेमा अधिक जान्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » Cosmogony